कोरोना : ब्राजिलमा 'p1' भ्यारिएन्ट फेला, कति खतरनाक ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कोरोना : ब्राजिलमा ‘p1’ भ्यारिएन्ट फेला, कति खतरनाक ?
मेरो लाइफस्टाइल ||2April, 2021
कोरोना भाइरसको नयाँ भ्यारिएन्ट फेला परेको छ । ब्राजिलमा पीवान नामको नयाँ भ्यारिएन्ट फेला परेको बताइएको छ ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भ्यारिएन्ट दक्षिण अफ्रीकामा भेटिएको कोरोना स्ट्रेनसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताइएको छ । यो दाबी साओपाओलोस्थित ब्यूटेनटेन बायोमेडिकल इन्स्टीच्युटका प्रमुख डिमास कोवासले गरेका हुन् । उनले ब्राजिलमा दक्षिण अफ्रीकाको जस्तै कोरोनाको स्ट्रेन फेला परेको र धेरै खतरनाक रहेको बताएका छन् ।
डिमास कोवासले ब्राजिलमा एकदिनमा ३ हजार ७ सय ८० जनाको निधन भएको एकदिनपछि प्रेस कन्फ्रेन्स गरेर यस्तो बताएका हुन् । यो भ्यारिएन्ट ब्राजिलमै उत्पित्ति भएको हो । यो दक्षिण अफ्रीकाको जस्तै भएको तर यसको ट्राभल हिस्ट्री दक्षिण अफ्रीकासँग नमिल्ने उनले बताए । त्यसैले ब्राजिलका वैज्ञानिक यसलाई लिएर हैरान भएका छन् ।
दक्षिण अफ्रीकाको भ्इारिएन्टले संसारका वैज्ञानिकलाई चिन्तामा पारेको थियो । किनभने यो धेरै नै संक्रामक र खतरनाक थियो । त्यसमा नयाँ भ्याक्सीनले काम गरिरहेको थिएन । ब्राजिल पनि आफ्नो देशमा उत्पित्ति भएको यो भ्यारिएन्टबाट हैरान छ । यो भ्यारिएन्टको नाम पीवान रहेको छ । यो तीव्र गतिमा मानिसलाई संक्रमित बनाउन सक्षम छ ।
यसका कारण ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको रेकर्ड दुई दिन पहिला सबैभन्दा धेरै कायम भएको थियो । ब्राजिल अमेरिकापछि सबैभन्दा कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने देश हो । अहिले भने ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको प्रकोपले धेरै सताइरहेको छ । त्यहाँका मानिसले सोसल डिस्टेन्सिङको नियम पालना नगरेको बताइएको छ । साथै भ्याक्सिनेशनको प्रक्रिया पनि धेरै सुस्त छ । सारा विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरुमध्येमा एक चौथाई मानिस ब्राजिलका रहेका छन् ।
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा यस्तो भयावह आँकडा अन्य देशमा छैन । ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले हालै कोरोना महामारी राम्रोसँग ह्याण्डिल गर्न नसकेकाले वैश्विक स्तरकै आलोचना सुन्नुपरेको थियो । उनले मंगलवार ९१८ मिलियन डलर्सको एग्जीक्यूटिभ अर्डर जारी गरेका छन् । यो रुपैयाँले ब्राजिलको हेल्थ सिस्टमलाई मजबुत बनाउन र महामारीसँग लड्न सहयोग गर्नेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको प्रयोग देशमा रहेका २६ सय पब्लिक हेल्थ क्लीनिक्समा कोरोना भ्याक्सिन पुर्याउन र मानिसलाई सुरक्षित राख्नका लागि प्रयोग हुने बताएको छ ।